Al-Shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii fuliyey qaraxii Banaadir | Arrimaha Bulshada
Home News Al-Shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii fuliyey qaraxii Banaadir
Al-Shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii fuliyey qaraxii Banaadir
Bulsha:- Kooxda Al-Shabaab ayaa maanta shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ninkii fuliyey qaraxii 11-ka bishan ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Ninkaan ayaa wareysi laga qaaday kahor inta uusan is-qarxin magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Xasan Iimaan oo loo yaqaan (Xaliye) ama (Caasim). Sidoo kale, wuxuu sheegay inuu kasoo jeedo Beesha Reer Shabeelle, gaar ahaan Reer Ciise.
Ninkaan ayaa sheegay inuu ku dhashay magaalada Afgooye ee Gobolka Shabeellada Hoose sanadkii 1989-kii, wuxuuna tilmaamay inuu waxbarashadiisa asaasiga ah ku qaatay isla magaaladaas.
Cabdullaahi ayaa kooxda Al-Shabaab ku biiray sanadkii 2010-ka, wuxuuna kamid ahaa ciidamadii ka howlgeli jiray gobolka Banaadir kahor inta uusan ku biiran qeybta is-qarxinta, sida lagu sheegay wareysiga.